वाशिंगटन डीसी भन्दा १ Washington घण्टा पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०२० नयाँ वर्ष घोषणा गर्‍यो: बिबा अनु न्यूबु
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » वाशिंगटन डीसी भन्दा १ Washington घण्टा पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०२० नयाँ वर्ष घोषणा गर्‍यो: बिबा अनु न्यूबु
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • फिजी ब्रेकिंग न्यूज • सरकारी समाचार • गुआम ब्रेकिंग न्यूज • किरिबाती ताजा खबर • न्यूजील्याण्ड ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • समोआ ब्रेकिंग न्यूज • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • भानुआतु ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
वाशिंगटन डीसी भन्दा १ 14 घण्टा अघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा नयाँ दशकमा प्रवेश गर्‍यो।
नयाँ बर्षको शुभकामना! Biba Anu Nuebu! जब गुवामले नयाँ वर्ष २०२० गिनाउँदै थिए यो डिसेम्बर on१ को बिहान १०.०० बजेको थियो। गुआमको साथमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा नयाँ दशकमा प्रवेश गर्यो।
प्याराडाईज टापु गुआम मनिलाबाट एक घण्टा उडानमा संयुक्त राज्य अमेरिका नयाँ वर्षमा बज्यो। हरेक दिन गुआम अमेरिकाका लागि दिन सुरू गर्दछ, र तिनीहरूले आधा रातमा पार्टीहरू, आतिशबाजी र धेरै गतिविधिहरूको साथ यो छुट्टीको स्वर्गको प्रख्यात रिसोर्ट होटेलमा मात्र गरेनन्। यो मा एक सुन्दर रात थियो गुआम
समुद्री तटहरू आज जनवरी १ मा भरिनेछ र उहि समयमा न्यू योर्कले बल खसाल्नेछ।
खुसी नयाँ वर्ष पनि लाई सामोआ र किरिबाटीमा क्रिसमस टापु - २०२० मा प्रवेश गर्ने विश्वका पहिलो देशहरू।
In सामोआ, नयाँ वर्षको हव्वा सामान्य भन्दा बढी चतुर थियो देशले स्वास्थ्यलागि डरलाग्दो डरलाग्दो सपनाको माध्यमबाट दर्जनौंको हत्या गरेको देख्यो। राजधानी अपियालाई नियाल्दै माउन्ट वेआबाट मध्यरातमा आतिशबाजी सुरु हुँदा यस वर्षको अन्त्य दुःख र यादको समय थियो।
स्काई टावरबाट आएको एउटा शानदार आतिशबाजी प्रदर्शनले न्यू इल्यान्ड, न्युजील्याण्डको नयाँ वर्षको उत्सव मनाउँदै छ। न्यूजील्याण्डको सब भन्दा ठूलो आतिशबाजी प्रदर्शन लेजर र एनिमेसनको साथ थियो, स्काई टावरको लागि पहिलो।
फिजीको सरकार हो प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध आजको रूपमा र देश त्यसो गर्न प्रशान्त राष्ट्रहरूको बढ्दो सूचीमा सामेल छ।
मार्शल टापुहरू, भानुआटु, निउ, सामोआ र न्यूजील्यान्डको प्रतिबन्ध पहिले नै प्रभावमा छन् जबकि प्रशान्त महास pop्ख्यक जनसंख्या पापुआ न्यू गुयानी अर्को महिनाको अन्तमा उनीहरूसँग मिल्छ।